फरक धारका निर्माता | Nagarik News - Nepal Republic Media
११ आश्विन २०७७ आइतबार
फरक धारका निर्माता
१९ माघ २०७४ ५ मिनेट पाठ
काठमाडौं – सर्ट फिल्ममा लगानी नेपाली निर्माताका लागि बालुवा पानी हाले जस्तै हो । न विदेशमा जस्तो यो डिजिटल प्लेटफर्ममा बिक्रि हुन्छ न हलमा चलेर पैसा आउँछ । तर, शक्तिबल्दव घोरासैनी त्यस्ता खास निर्मातामा पर्छन् जसले लघु फिल्म बनाएरै आफूलाई निर्माताको रुपमा स्थापित गरेका छन् ।
निर्माताको रुपमा पाँचवटा फिल्म आफ्नो नाममा लेखाएका शक्तिले तीनवटा लघु फिल्म बनाएका छन् । जसमध्ये ‘बोक्सी’ले जसोतसो लगानी उठाए पनि ‘मिरर’ र ‘ओ माई म्यान’को लगानी उठ्ने प्रतिक्षामा छन् । त्यसका बावजुद घोरासैनीलाई किन लघु फिल्ममा नै ज्यादा रुचि छ ?
‘कथा नै हो,’ घोरासैनीले भने, ‘ कतिपय कथा यस्ता हुन्छन् जुन तपाईं फिचर फिल्ममा भन्न सक्नु हुन्न । केही कथा पर्दामा भनिनु पर्छ भन्ने लागेर नै लगानी गरेको हुँ । यसमा मैले नाफा घाटाको हिसाब गरेको छैन ।’ घोरासैनीले ‘बोक्सी’मा करिब २३ लाख खर्च गरेका छन् भने ‘मिरर’मा ५ लाख । अघिल्लो साल मात्र निर्माण भएको ‘ओ माई म्यान’मा भने उनले ९ लाख खर्च गरेका थिए ।
बाह्र वर्ष अघिको कुुरा हो, रोजगारीको अवसर खोज्दै मातृभूमि छाडेका युुवा पुुस्तालाई लक्षित गरि भिडियो म्यागाजिन बनाउने जोश चल्यो – फिल्म निर्माता शक्ति बल्दव घोरासैनीलाई त्यतिबेला । । जुुन सोचेजस्तो भएन । त्यसपछि नयाँ ढङ्ग र थप जाँगर लिएर फिल्मी क्षेत्रमै जम्ने सोचाइ बनाए । मजाले चलिरहेको आफ्नो व्यापार पनि छाडिदिए ।
भिडियो म्यागाजिन फ्लप भएर के भो ? उनले हिम्मत हारेनन् । त्यसपछि ‘बोक्सी’ फिल्म लिएर बजारमा आए । यसमा उनी कलाकार र निर्माताको दोहोरो भूूमिकामा छन् । अतिरिक्त संवाद अविनाश श्रेष्ठको छ । बालकृष्ण समको नाटकमा आधारित ‘बोक्सी’ सामाजिक विषयवस्तुुमा आधारित छ । फिल्म त्यसताका निकै हिट भयो ।
थुुपै् अवार्डहरुमा सहभागी भएर बिभिन्न बिधामा अवार्ड जित्न र चर्चा बटुुल्न सफल भयो । यसपछि उनको ‘द मिरर’ लघु चलचित्र बिभिन्न अवार्डमा सहभागी भएर सार्वजनिक पनि भयो । यो नेपाली ग्रामिण महिलाको दिनचर्यामा आधारित छ । झिसमिसेमै उठेर दिनभरको घरधन्दा र बाहिरी कामको बोझले लखतरान भएर सुुतेपछि इच्छा विपरित यौन क्रियामा भाग लिनुुपर्ने महिलाको बाध्यता सम्मलाई यसमा देखाइएको छ । जम्मा सात मिनेटको भएपनि यसलाई पनि धेरैले मन पराइदिए । ‘बोक्सी’ र ‘द मिरर’ चलचित्रलाई नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले विशेष चलचित्र घोषण गरी देशको प्रतिनिधित्व गराउँदै विभिन्न फेस्टिभलहरुमा सहभागी गराएको थियो ।
वि. सं २०६९ सालमा आएको फिल्म ‘किन लाग्छ माया’ले धेरै दर्शकको मन जित्यो । हाल उनी फिल्म ‘लम्फू’ को अन्तिम काममा व्यस्त छन् । ‘यो एउटा युुवाको सपनाको कथा हो’, उनले भने, ‘मान्छेलाई कसरी समयले नायक र खलनायक बनाउँछ, यो त्यस विषयमा आधारित छ ।’ फिल्मले आम युुवाको मन जित्ने कुुरामा उनी ढुुक्क छन् । फिल्म वैशाख २८ गते रिलिज हुँदैछ । सफल निर्माताको अलावा घोरासैनीले ‘बोक्सी’ ‘जनता जिन्दाबाद’ ‘हिफाजत’ र ’टिभिसी’ मा अभिनय कौसल देखाइसकेका छन् । ‘लम्फू’को प्रदर्शनपश्चात भने घोरासैनीले ‘सिल्ली’ शीर्षकमा फिल्म बनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।‘लम्फू’ झैं यसले पनि सामाजिक तथा राजनीतिक चक्रब्युहमा फसेको चरित्रलाई प्रस्तुत गर्नेछ । यसको लेखन कार्य चलिरहेको छ,’ घोरासैनीले भने ।
प्रकाशित: १९ माघ २०७४ ०८:३८ शुक्रबार
अनुगमन टोली पुगेपछि तरकारी बजारका आलु-प्याज व्यापारीकाे भागाभाग
बहराईनका राजकुमार मनास्लु आउने भएपछि ७० जनाको टोली सामागाउँमा
युक्रेनमा भएको सैनिक विमान दुर्घटनामा थप एक जनाको मृत्यु, शनिबार राष्ट्रिय शोक घोषणा
युक्रेनमा भएको सैनिक विमान दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २६ पुगेको छ। सैन्य प्रशिक्षणका लागि उडानमा रहेका र विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको सम्झनामा शनिबार राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिएको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा हस्ताक्षरित एक शोक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
गण्डकी गाउँपालिकाको गाउँसभा पुनः स्थगित
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले शनिबार बोलाएको गाउँ सभा पुनः स्थगित भएको छ। गत असार १० गतेभित्र सक्नुपर्ने गाउँ सभा गणपुरक सदस्य संख्या नपुगेका कारण स्थगित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले बताए।
सत्याग्रही डा. केसीको समर्थनमा बेनीमा प्रदर्शन
चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै अनशनरत सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै नेपाल मानवअधिकार संगठन म्याग्दीले कार्यक्रम गरेको छ।
'मानव अधिकार उल्लंघनमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेन'
कोभिड-१९ को महामारीका बेलामा जघन्य मानव अधिकार हननका घटना भएकाले सरकार र मानव अधिकारकर्मीको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ।